“Musiki Wedenga Nenyika” | Swedera Pedyo
2 Pane “moto” unodziisa ganda redu masikati. “Moto” iwoyo uri kupfuta uri makiromita mamiriyoni 150 kubva patiri! * Saka zuva rinofanira kuva nesimba rakawanda kwazvo kuti ukwanise kunzwa kupisa kwaro riri kure kwakadaro! Asi, pasi rinotenderera choto chinotyisa ichocho riri pachinhambwe chakakodzera. Dai pasi raiva pedyosa, mvura yose yepasi yaizopwa; dai raiva kuresa, yose yaioma kuita chando. Chero chimwe chezviviri izvi chaizoita kuti pasi redu risava noupenyu. Kunze kwokukosha kuupenyu pasi pano, chiedza chezuva chakachenawo uye chinoshanda zvakanaka, tisingatauri zvedu zvokufadza kwacho.—Muparidzi 11:7.
6 Chinotonyanya kushamisa kupfuura ukuru hwenyeredzi uwandu hwadzo. Kutaura chokwadi, Bhaibheri rinopa pfungwa yokuti nyeredzi dzinenge dzisingaverengeki, dzakaoma kuverenga se“jecha regungwa.” (Jeremia 33:22) Mashoko aya anoratidza kuti kune nyeredzi dzakawanda kupfuura nokure dzatinogona kuona nemaziso edu pasina chinoabatsira. Pamusoro pazvo, kudai munyori weBhaibheri akadai saJeremia akanga atarisa mudenga usiku ndokuedza kuverenga nyeredzi dzinooneka, aizodai akangoverenga dzinenge zviuru zvitatu, nokuti ndihwo uwandu uhwo ziso risina chinoribatsira rinogona kuona usiku hwakajeka. Nhamba iyoyo inogona kuenzaniswa nenhamba yetsanga dzejecha dzinongozara ruoko. Zvisinei, sezvazviri chaizvo nhamba yenyeredzi yakakura kwazvo, sejecha regungwa. * Ndiani angaverenga nhamba yakadaro?
7 Isaya 40:26 inopindura kuti: “Tarirai kumusoro nameso enyu, muone kuti ndiani wakasika izvozvi, unobudisa hondo yazvo yakawanda; iye unozvidana zvose namazita azvo.” Pisarema 147:4 rinoti: “Unotara kuwanda kwenyeredzi.” Nyeredzi ‘dzakawanda’ sei? Iwoyo hausi mubvunzo uri nyore. Vanodzidza nezvenyeredzi vanofungidzira kuti kune nyeredzi dzinopfuura mabhiriyoni 100 muGwara Renzou redu rino bedzi. * Asi ratiri isu rinongova rimwe remapoka enyeredzi mazhinji, uye mazhinji aiwayo akatozara nenyeredzi kupfuura apa. Kune mapoka enyeredzi mangani? Vamwe vanodzidza nezvenyeredzi vanofungidzira kuti mabhiriyoni 50. Vamwe vanofungidzira kuti kungangova neanosvika mabhiriyoni 125. Naizvozvo vanhu havatombozivi uwandu hwemapoka enyeredzi, chida nhamba chaiyo yemabhiriyoni ose enyeredzi dziri maari. Asi, Jehovha anoziva nhamba iyoyo. Uyezve anopa nyeredzi imwe neimwe zita rayo pachayo!
^ ndima 2 Kuti unyatsonzwisisa nhamba huru iyi funga pamusoro peizvi: Kuti ufambe mufambo wacho nemotokari—kunyange uchimhanya makiromita 160 paawa, uchifamba maawa 24 pazuva—zvinokutorera makore anopfuura zana!
^ ndima 6 Vamwe vanofunga kuti vanhu vekare munguva inotaurwa muBhaibheri vanofanira kunge vakashandisa rumwe rudzi rweteresikopu yekare. Kana kusiri kudaro, vanofunga vachidaro, vanhu vomunguva idzodzo vangadai vakaziva sei kuti nhamba yenyeredzi yakakura kudaro, hadziverengeki sokuona kwevanhu? Kufungidzira kusina zvikonzero kwakadaro kunosiya Jehovha, Munyori weBhaibheri ari kunze kwenyaya yacho.—2 Timoti 3:16.
^ ndima 7 Funga kuti zvaizokutorera nguva yakareba sei kungoverenga nyeredzi mabhiriyoni 100. Kudai waizogona kuverenga imwe pasekondi yoga yoga—woramba uchidaro kusvika maawa 24 pazuva—zvaizokutorera makore 3 171!